Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Senegalese Edouard Mendy Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Edouard Mendy na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezi na ulo, ihu ovu (enyi nwanyi / nwunye), nnabata na ndu.
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, edemede a bụ mkpokọta zuru oke nke Bio’s Goalkeeper, bido n’isi mbido ya rue mgbe ọ bịara bụrụ onye ama ama.
Edouard Mendy Life Akụkọ. Ebe E Si Nweta Foto- Instagram.
Ee, mụ na gị amatala vidiyo ndị gosipụtara ọnụnọ ya na-enye iwu n'ime mpaghara ntaramahụhụ.
Otú ọ dị, ọ bụghị ọtụtụ, karịsịa ndị na-akwado Chelsea, gụrụ akwụkwọ ndụ ya na-akpali akpali ma ọ bụ ọbụna mara eziokwu ahụ Edouard Mendy metụtara Ferland Mendy.
Ugbu a n’enweghị nnukwu nsogbu, ka anyị bido n’afọ gbasara mmalite afọ ndụ ya.
Edouard Mendy Childhood Akụkọ:
Maka ihe eji amalite Biography, Onyenchekwaebumnobi nwere aha otutu “Door Doorkeeper”. Edouard Mendy mụrụ na ụbọchị 1 nke Machị 1992 nye nne ya (si Senegal) na nna mbubreyo (si Guinea-Bissau), na obodo French nke Montivilliers, Northern France.
Edouard Mendy Afọ na-eto eto:
Onye nlekọta 6 ụkwụ 6 sentimita asatọ nọrọ na nwata na France yana ụmụnne ya gụnyere nwanne nwanyị. Ghara ichezọ, nwanne nwanne Edouard Mendy bụ Ferland Mendy- Onye ya na ya tolitere.
Ruo ugbu a, ịmụmụ ọnụ ọchị na-apụta site na ihu ya mgbe ọ bụla ọ na-echeta oge ntorobịa ya juputara na-atọ ụtọ- dịka nwa nke ndị nne na nna na-abụghị French - onye ghọrọ onye nwere mmasị na egwuregwu ahụ dịka nwatakịrị.
Edouard Mendy Ezigbo Ezinụlọ:
Ọbụna dịka nwa nke nne na nna kwabatara, ezigbo ịda ogbenye enweghị isi na Bio nke Goalkeeper. Nke a pụtara na ọ esighị n'ụlọ dara ogbenye, kama kama, ọ bụ ezinụlọ na-etiti ụlọ.
N'ezie, nne na nna Edouard Mendy rụrụ nnukwu ọrụ n'ịzụlite ya n'enweghị ụkọ. N'ikwu nke a, ha dị njikere mgbe niile inyere ya aka ịzọ ụzọ ọ bụla ọ họọrọ maka onwe ya.
Edouard Mendy Ezinụlọ:
Agbanyeghị, ị maara Shot-Stopper dị ka French na Senegal. Eziokwu bụ, o nwekwara ezinụlọ sitere na Guinea-Bissau ebe nna ya si.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụ otu n'ime mmadụ ole na ole si n'Africa dị iche iche na-agba bọl.
Antonio Rudiger Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Egwuregwu bọọlụ bidoro Edouard Mendy:
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ọ hụrụ ịhụnanya n'anya bọọlụ karịa ihe ọ bụla ọzọ. N'ikwu nke a, ọ nọ na nrọ nke ịchọrọ ịghọ ọkachamara na egwuregwu ahụ.
Ná mmalite, ndị nne na nna Edouard Mendy nyeere aka mee ka ọ nweta nrọ ya site na idebanye aha ya na Le Havre Caucriauville football club mgbe ọ bụ 7 afọ.
Mgbe ọ na-eme nzọụkwụ mbụ ya n'egwuregwu ahụ na klọb ahụ, Edouard nwere ọtụtụ arụsị bọlbụ onye ọ lere anya gụnyere Fabian Barthez. Ọ gara n'ihu sonyere Le Havre Athletic Club ebe o mezuru ikike ya nke isi ihe mgbaru ọsọ.
N'agbanyeghị na ọ dị ezigbo mma, Edouard abụghị onye na-elekọta ihe mgbaru ọsọ mbụ Le Le Havre Athletic Club. Ọ rapaara n'azụ nwere Zacharie Boucher nwere ọgụgụ isi, mmepe nke mere ka ọ daa ọkwa ka ya na CS Municipaux gwuo egwu.
Ndakpọ olileanya nke ọrụ mbụ na ịkwụsị egwuregwu bọọlụ:
Ihe Nleba anya na ihe ndi ozo mechara bido oru ya na AS Cherbourg ebe o nweghi oge egwu.
Mgbe nkwekọrịta Edouard na AS Cherbourg gwụsịrị na 2014, ọ nwere onyinye ịbanye na klọb ndị ọzọ mana ọ na-ele anya na ya na-egwu egwuregwu na mpụga France.
N'oge ahụ, onye na-elekọta ya nyere ya mmesi obi ike na ha ga-emechi nkwekọrịta. N'ụzọ dị mwute, ọ rụghị ọrụ ma nwa afọ iri abụọ na abụọ ahụ enweghị ọrụ.
Agbalịrị m ịkpọtụrụ ya (onye bụbu onye nnọchi anya ya) mana ọ zaghị. Anụghị m ihe ọ bụla n'ọnụ ya belụsọ ederede na-achọ m ọdịmma maka ọdịnihu.
Edouard gwara LeParisen nke azụmahịa botch ahụ. Goalie na-enweghị obere ụlọ hụrụ onwe ya ka ọ sonyere n'ahịrị nke ndị na-achụ nta ọrụ na Northern France. Mgbe ọ nọrọ otu afọ site na ịgba bọl, Edouard dara ogbenye kpebiri ịkwụsị egwuregwu ahụ.
Maka ndị na-agba ụkwụ ụkwụ ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ, ịbụ onye na-enweghị ọrụ yiri ka ọ na-enweta ụra n'ihu.
Ringsdọ nke ọdịda na-ahapụ akara ndị na-eme ka ị nwe obi abụọ ma ị ga-aga n'ihu na bọọlụ ma ọ bụ.
Edouard, gwakwara SoFoot magazine.
Edouard Mendy Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Dị ka Liverpool na-ekwu, Senegal Goalkeeper ahụghị onwe ya ka ọ na-eje ije naanị ya.
Dị ka a tụrụ anya ya, ndị nne na nna Edouard Mendy na ndị ezinụlọ ya nọ ebe ahụ iji kasie ya obi, dịka ha dụrụ ya ọdụ ka o nye egwuregwu ahụ ohere ọzọ- nke o mere.
Obi dị m ụtọ, mgbe ahụ onye na-eche nche na-enweghị ntụkwasị obi na enweghị nchebe laghachiri Le Havre ebe bọọlụ malitere maka ya- na-enweghị ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ụgwọ ọrụ. You Ya na ọgbakọ klọb na-azụ ọzụzụ mgbe niile otu afọ na-enweghị akwụ ụgwọ.
Otu ụbọchị, n'oge na-adịghị anya, Edouard nwetara ozi ọmụma na Marseille na-achọ onye na-eche nche ka ọ nọchie ebe nchekwa- Brice Samba na Julien Fabri bụ ndị na-agbazinye ego. Na-etinye aka ma na-agafe ule nke klọb, ọ ghọrọ onye nlekọta ha nke anọ.
Nwa akwukwo akwukwo n'akwukwo nke oma
Ọ bụ ezie na Senegal na-ebili ngwa ngwa nọ n'azụ onye nwere ikike karịa Florian Escales bụ onye mbụ họọrọ Shot-Stopper. Ka o sina dị, ọ nọgidere na-agbasi mbọ ike - ọrụ nke nyeere ya aka inweta nnukwu ọkwa n'oge na-adịghị anya.
Edouard Mendy Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Azụrụ m ndị ọkachamara n'oge niile m nọrọ na Marseille. Ọ bụ ihe mmadụ nwere ike ịrọ nrọ dịka Ee e: 4 onye na-elekọta ụlọ.
Ọzụzụ na kpakpando dị ka Abu Diaby, Lassana Diarra na ndibọhọ duels megide Michy Batshuayi ma ọ bụ Steven Fletcher n'ezie wepụtara ihe kachasị mma n'ime m.
Edouard Mendy- na ahụmahụ ya kwuru.
N'ịchọ maka oge igwu egwu oge, Onye agha ahụ gara Ligue 2 ekike Reims ebe ọ rụrụ ọrụ iji bụrụ onye nlekọta nhọrọ mbụ nke klọb, n'oge oge 2017-2018.
O mechara nyere klọb ahụ aka ịkwalite Ligue 1 tupu ọ gawa Rennes.
Akụkọ banyere Rennes Success:
Mụ na klọb ahụ, Edouard bilitere dị oke ọsọ, site na inyere klọb ahụ aka ka ọ bụrụ nke atọ iji ruo eru maka Njikọ Njikọ.
O nwetara otuto site n'aka ọtụtụ, gụnyere akụkọ Rennes na akụkọ akụkọ Chelsea Petr Cech onye gwara ndị Bad ' Frank Lampard ịbanye ya.
Ọsọ ọsọ gaa n'oge edere Life Life, Edouard Mendy- dị ka Neal Maupay na Lucas Digne so n’etiti ndị French dị n’ibu na-aga ahịa ha na Premier League.
Ọ na-ekpe ekpere ka ọ bụrụ onye nlekọta mbụ na Chelsea FC. Dị ka a tụrụ anya, Mendy ga-enye asọmpi nke ga-agbanye aka Kepa Arrizabalaga laghachi na nke kacha mma ma ọ bụ wepụ ya dị ka No 1 Stopper.
Kedu ụzọ ọ bụla na-aga maka ya, ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu mgbe niile, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Edouard Mendy's Girlfriend?
Site na ihe ịga nke ọma ya, na-eguzo na 6 ụkwụ 6 sentimita asatọ ma ọ bụ 198 cm n'ogo, nwoke mara mma si Senegal nwere ike inwe ihe ndị na-arụ ọrụ maka ndụ ịhụnanya ya.
Agbanyeghị (n'oge a edere), Edouard egosighi nwanyị ahụ na-eduga ya ịga nke ọma.
Onye bụ Edouard Mendy?
N'ụzọ dị mma, ọ debanyere aha na Premier League ebe ndị agbụrụ ga-eme ya n'oge na-adịghị anya ịza ajụjụ maka ma ọ nwere enyi nwanyị ma ọ bụ na ọ lụrụ di na nwunye- nke pụtara na ọ nwere nwunye na ụmụaka.
Eziokwu bụ, anyị na-enwe obi abụọ ma nwoke ọ bụla ga-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye. N'ihi ya, anyị na-emesi gị obi ike, ọ gaghị adị anya tupu ị zute enyi nwanyị Edouard Mendy ma ọ bụ nwunye. Oge ya na ihe ịga nke ọma na London ga-agwa.
Edouard Mendy Ndụ Ezinụlọ:
Shot-Stopper bụ onye ji mmekọrịta ya na ezinụlọ ya kpọrọ ihe. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ọ hụrụ ndị nọ ya nso n’anya.
N'ebe a, anyị na-ewetara gị Eziokwu gbasara nne na nna na ụmụnne Edouard Mendy. Ọzọkwa, anyị ga - enyere gị aka ịmata eziokwu banyere ndị ikwu ya ka ị nwee ike ịghọta ya nke ọma.
Banyere Nna Edouard Mendy:
Na ncheta ịhụnanya ya, nna nwoke French (Pa Mendy) anọkwaghị. Ọ nwụrụ n'ọrịa siri ike. Obi dị m ụtọ na nna Edouard Mendy dịrị ndụ ịhụ ka nwa ya ghọrọ ọkachamara.
Akụkụ dị mwute bụ eziokwu ahụ na ọ dịrịghị ogologo oge iji hụ ka Edouard mechara nwee mmeri na egwuregwu ahụ.
Dị ka ụzọ isi kwụọ nna ya ụgwọ, Onyenchekwaebumnobi kwetara na ọ ga-egwu maka agbụrụ nna ya (Guinea Bissau) - naanị ọdịdị mba ụwa.
Banyere mama Edouard Mendy:
Nke mbu, obu otu n'ime ndi kacha egwu ya. Edouard na-emekarị ememe nne ya na mgbasa ozi mmekọrịta na-enweghị obi abụọ banyere kemistrị dị n'etiti ha. Anyị nwere foto mara mma nke ya n'okpuru.
N'etiti ndị mụrụ ya, ị ga-ekwenye na m Edouard Mendy ga-adị ka nna ya-ma n'ịdị elu na agba.
Lee Edouard Mendy ya na nne ya na-akwado ya. Foto: Instagram.
Banyere Edouard Mendy ibmụnne:
Nnyocha miri emi banyere foto na goalies Instagram peeji ga-eme ka ị kwenye na ọ bụghị naanị nwa nke ndị mụrụ ya.
Edouard Mendy nwere ọtụtụ ụmụnne nwoke na nwanne nwanyị nke toro ogologo dị ka ya. Nwere ike ịhụ ya na foto dị n'okpuru?
Foto a na-adịghị ahụkebe nke Edouard Mendy na ụmụnne ya ndị nwoke na ụmụnne ya. Ihe onyonyo nke Instagram
Banyere ndị ikwu Edouard Mendy:
Ewezuga ezinaụlọ nke goalie, enweghị ndekọ banyere nne na nna ya ochie, nwanne nne ya, nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Ọzọ na-akpali mmasị, Edouard Mendy bụ nwanne nwanne Ferland Mendy onye n'oge edere, na-egwu Real Madrid na ndị otu mba France.
Edouard Mendy Ndụ Nke Onwe:
Ndị enyi, ndị Fans na ndị otu egwuregwu nwere ike ịgba akaebe maka ụfọdụ ihe ejiri mara ndị goalie na mpụga bọọlụ.
Ha gụnyere ọdịdị ụwa ya, imeghe, nchekwube na oke ọrụ ya. Ọ na-enwe mmasị iso ndị enyi na-akpakọrịta ma nwee mmasị na ejiji.
Na mgbakwunye, ikiri ihe nkiri na igwu egwuregwu vidio bụkwa ụfọdụ ọrụ ọ na-eme mgbe ọ bụla ọ nọghị na egwuregwu.
Edouard Mendy Web na Net Worth:
Ka anyị tụlee etu ihe mgbanaka ahụ bara uru bụ 2020 na isi mmalite nke ego ya. Iji malite, Edouard Mendy nke ruru na 2020 ka na-enyocha.
Obi abụọ adịghị ya, ọ nwere akụ na ụba na-ebili ngwa ngwa n'ihi nnukwu ụgwọ ọrụ Chelsea FC.
“Onye nche ọnụ ụzọ toro ogologo” na-enwetakwa ego dị mkpa maka ịkwado ụdị. Agbanyeghị, ụdị ndụ ọhụụ ya na-eme ka o sie ike ịgbaso usoro mmefu ya.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ doro anya na ọ nwere ikike ịkwọ ụgbọ ala posh ma biri n'ụlọ dị oke ọnụ.
Edouard Mendy Eziokwu:
Iji mechie isiokwu a na-adọrọ mmasị, ebe a bụ akụkọ amachaghị ma ọ bụ Eziokwu banyere nkwụsị.
Eziokwu # 1- Edouard Mendy Okpukpe:
Ikpe ikpe site na nwa nwanne nna ya- Ferland, Ọ dị mfe ịchọpụta akụkụ nke ndị kwere ekwe kewaa na ọ dabara. Ọnọdụ anyị nwere nnukwu ihu ọma ya ịbụ onye Alakụba dịka Islam bụ okpukperechi nna ya.
Eziokwu # 2 - FIFA ọkwa:
Ihe mgbaru ọsọ ahụ FIFA FIFA zuru oke bụ naanị ihe 2020 nwere ikike nke ihe 78. Okwesiri ka ya na ya Kepa Arrizabalaga onye nwere mkpokọta 83 nwere ikike nke 87. Ọ bụghị ya?
Okwesiri inweta ikike karia? Foto: SoFIFA.
Eziokwu # 3 - Acumen azụmahịa:
Ọ bụrụ na ọkachamara anaghị echekwa maka Edouard, ọ ga-edozi azụmahịa. Ọ bụ onye nwere nnukwu mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ ga-agarịrị nke ọma n'akụkụ ahụ.
Douard Osoque Mendy
Aha otutu onye nche ọnụ ụzọ dị ogologo
Ụbọchị ọmụmụ Bọchị 1 nke Mach 1992
Ebe amụrụ onye Montivilliers, France
Egwuru egwu ọnọdụ Ihe mgbaru ọsọ
Aha nke nne na nna Edouard Mendy N / A
Aha ụmụnne nwanne Edouard Mendy N / A
Ngwakọta Net N'okpuru Nyocha.
omume ntụrụndụ iso ndị enyi na-egwupụta, Ikiri ihe nkiri na igwu egwuregwu vidio.
elu 6 etkwụ, sentimita 6
Onye nwe obodoÉdouard Osoque Mendy French na Sengalese
Daalụ maka ịgụ nchịkọta anyị banyere akụkọ ndụ Edouard Mendy. Anyị nwere olile anya na ọ kpalie gị ikwere na ịkwụsị enweghị akwụ ụgwọ.
N'enweghị obi abụọ ọ bụla, Bio ya na-akọ akụkọ- site na ndakpọ olileanya ruo n'ịghaghachi usoro ya ebe ọ dabere onwe ya maka ohere na-agbanwe ndụ.
Edouard Mendy nne na nna, ọkachasị nna ya nwụrụ anwụ kwesiri inwe nnukwu obi ụtọ maka ndidi na nnọgidesi ike ya.
Na lifebogger, nguzosi ike na ịkwụwa aka ọtọ bụ okwu anyị na - echekwa akụkọ ịgba bọl.
Kpọtụrụ anyị ma ọ bụ hapụ okwu ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya na isiokwu a. Ma obu otua, jiri obi oma gwa anyi ihe ichere maka ncheta ncheta nke Onyenchekwaebumnobi.
Trevoh Chalobah Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Eh ben ..Pour une fois un Africain footeux n'est pas avec une blanche cchapeau